Roobab Qasaaro geystay oo Muqdisho ka da’ay | KEYDMEDIA ONLINE
Roobab Qasaaro geystay oo Muqdisho ka da’ay
Muqdisho (KON) - 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho iyo Gobolada dariska la ah ka da’ay Roobab aad u xoogan, isla markaana dadka danyarta ah u geystay qasaaro iskugu jira naf iyo maal, iyadoona Roobabkaani ay ahaayeen kuwa wata dabeelo Xoogan.
Qasaaraha ay Roobabkaani ka geysteen ayaa intooda badan waxey ku dheceen dadka Barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, iyadoona qaar ka mid ah Dadka ku dhaqan kaam kuyaala Agagaarka Taalada Sayidka ay KEYDMEDIA ONLINE u sheegay in Roobabkii Xalay ka da’ay Muqdisho ay ku guryo beeleen qoysas deganaa kaamkaasi, kuwa kalana uu daad uu buux dhaafiyay guryahooda.
Roobabkaani ayaa sababay geerida canug yar oo 2 Sano Jir ah inta la ogyahay ka dib markii uu ku soo dumay guri shidmihiisu qadiimi ahaa oo kuyaala degmada Dharkeenleey ee magaalada Muqdisho, iyadoona dhaawacyo yar yar uu ka soo gaaray 2 ruux ka mid ahaa qoyskaani uu Guriga ku soo dumay.
Sidoo kale Roobabkaani ayaa sameen ku yeeshay isku socodka Gaadiidka iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxaana Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho noqdeen kuwa ay fariisteen dadadkii Roobababkaasi.
Ugu danbeentii dadka Barakacayaasha ah ee ku guryo beelay Roobabkaani ayaa Codsaday in lala soo gaaro gar gaar, waxeyna Codsiyo kala duwan u dirsadeen Dowladda Soomaaliya iyo Hey’adaha maxaliga ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho.